Robert Mugabe forced into talks with opposition after China told him 'to behave'
A demand by China that the Zimbabwean government "behave" in the run-up to the Olympics lies behind Robert Mugabe's surprise decision to open negotiations with the opposition.
By Ian Evans in Capetown and Special Correspondent 26 July 2008 • 2:45pm
Last week Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai signed a peace deal Credit: Photo: Getty Images
China's leaders, who have have long enjoyed a close relationship with Zimbabwe's beleagured president, feared growing protests in the run-up to the Games and so leaned on Mr Mugabe to agree to the historic talks which began on Thursday.
Mr Mugabe and Morgan Tsvangirai, leader of the opposition Movement for Democratic Change, met for the first time in 10 years last week after signing a memorandum of understanding mediated by South Africa's president, Thabo Mbeki, to form a government of national unity.
But while Mr Mbeki basked in the glow of the diplomatic coup, winning high praise from the French president, Nicolas Sarkozy - currently in charge of the EU presidency - Zimbabwean government sources said he had little to do with it.
"They also warned him (Mugabe) that if British Prime Minister, Gordon Brown and the US managed to force the tabling of UN Security Council sanctions against Zimbabwe again, they will be in no position to support Harare. China has demanded that loyalty back in equal terms."
China has invested billions of dollars not just in Zimbabwe, but across Africa in its attempts to secure mineral rights to fuel its burgeoning economy. Its trade with the continent is expected to rise to $100bn by 2010, a signficant amount of which involves |Zimbabwe's platinum mines.
"However this must not be misconstrued as a weakness on the part of Zanu PF but as a strategy to keep the opposition out of full power. They will certainly find themselves on the drawing board again after a future election, because Zanu PF is not willing to relinquish power."
Zimbabwean officials know that aid from the US, Britain and the EU depends on the outcome of the talks. On Friday President George W.Bush stepped up US pressure on Mr Mugabe by introducing new sanctions against the "illegitimate" president.
The MDC says 120 of its supporters have been killed by pro-Mugabe thugs and thousands injured since the first presidential vote, which it won but without a majority of all votes, on March 29.